युएइसँग पराजित भएसँगै नेपालको विश्वकप खेल्ने सम्भावना समाप्त
१२ मंसिर २०७८, आइतबार ४:३४
काठमाडौं। संयुक्त अरब इमिरेट्सँग पराजित भएसँगै नेपाली महिला क्रिकेट टोलीको आगामी सन् २०२३ मा हुने टि-२० विश्वकप खेल्ने सम्भावना समाप्त भएको छ।
आइसिसी महिला टि २० विश्वकप एसिया क्षेत्र छनोटको अन्तिम खेलमा आज नेपाल युएईसँग ४८ रनले पराजित भएपछि नेपालको विश्वकप खेल्ने सपना समाप्त भएको हो। त्यस्तै युएई भने अपराजित रहँदै एसिया क्षेत्रबाट आगमी वर्ष हुने टि २० ग्लोबल छनोटमा पुगेको छ।
१२८ रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको नेपाल १९ दशमलव ४ ओभरमा जम्मा ७९ रन समेटियो । नेपालकी इन्दु बर्माले २० बलमा १ चौकासहित १५ रन बनाइन् भने सीता रानामगरले ८ बलमा ३ चौकासहित सर्वाधिक १३ रनमा आउट भइन् । इन्दु र सीताबाहेक अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्।
त्यस्तै कविता कुँवर ४, रुविना क्षेत्री बेलबासे २, सरिता मगर ८, कविता जोेशी १ र करुणा भण्डारी २ रनमा आउट भए भने काजल श्रेष्ठ ८, अप्सरी बेगम ४ तथा करुणा भण्डारी २ रनमा आउट भए।
बलिङतर्फ युएईकी समायरा धरणीरकाले ४ विकेट लिइन् भने खुशी शर्मा र चमानी सेनेविरत्नेले २–२ विकेट लिए । चया मुगलको नाममा १ विकेट लिए। त्यसअघि आइसिसी एकेडेमी ग्राउन्ड नम्बर २ मा टस हारेर ब्याटिङ पहिले व्याटिङ गरेको युएईले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाउँदै १२७ रन बनाएको थियो । युएईकी चमानी सेनेवित्नेले सर्वाधिक ५२ रनको योगदान दिइन भने थ्रीथा सतिसले ४७ रन जोडिन । काभिसा इगोडागेले २२ रन जोडिन्।
नेपालका कविता कुँवरले २ विकेट लिइन् भने सबनम राई, सीता रानामगर र सङ्गीता राईले १–१ विकेट लिए । नेपाल पहिलो खेलमा हङकङसँग ६ विकेटले पराजित भएको थियो भने दोस्रो खेलमा भूटानलाई ८ विकेटले पराजित गरेको थियो। त्यस्तै नेपालले आफ्नो तेस्रो खेलमा कुवेतलाई ९ विकेट र चौथो खेलमा मलेसियालाई ६ विकेटले पराजित गरेको थियो।
युएई ५ खेलमा १० अङ्कका साथ ग्लोबल छनोटमा पुगेको छ। नेपाल ५ खेलमा ३ मा जीत र २ मा हारसहित ६ अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा रह्यो।
प्रधानमन्त्री कप टी–ट्वान्टी क्रिकेटमा पुलिस क्लबकाे लगातार चौंथो जित
रंगशालाहरुमा दर्शकलाई प्रवेश दिइने
१९ खेलाडीलाई कोरोना भएपछि पुलिस र च्यासलबीचको खेल स्थगित
खराब फर्मबाट गुज्रिएका विराट कोहलीले दिए टेस्ट म्याचकाे कप्तानबाट राजिनामा
स्विडेन, फिनल्याण्ड र नर्वेले थाले ब्वाँसो मार्ने अभियान
प्रदेश २ को राजधानी तोक्न मतदान सुरु, के होला निर्णय ?
चितवन कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा
भ्याक्सिन नहुँदा सुदूरपश्चिममा ‘बुस्टर डोज’ कार्यक्रम प्रभावित
स्थानीय तहको चुनावबारे छलफल गर्न बोलाइयो राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक
७५ वर्षे एक वृद्ध जसले ९३ पटक चुनाव हारे, काे हुन् उनि ?
प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भेटवार्ता, के- के भयो कुराकानी ?
मन्त्री झाँक्रीले गरिन् १०० दिने कार्यकालको समीक्षा
© 2022 All Rights Reserved - Lekhajokha News Site By : SobizTrend